Radial Drilling Machine Manufacturers & Suppliers | China Radial Drilling Machine Factory
RADIAL-egwu ala igwe atụmatụ: Kpọkọtanụ n'ibu-eletriki-haịdrọlik ọrụ, iji ọtụtụ. Na dịgasị iche iche nke na-agba na ndepụta, na ntuziaka, ike na ịrụ ezi faili ntanetịime. Ndepụta nke igwe na-nnọọ mfe aku na disengaged n'oge ọ bụla. Na mma na a pụrụ ịdabere oriri nchekwa igwe, n'akụkụ nile mfe ime ihe na mgbanwe. All njikwa centralized na isi ngwaahịa mfe ime ihe na mgbanwe. CLA ...
Product iwebata 1.The isi isi iberibe nke elu ike igba ígwè na pụrụ iche ígwè. 2.By na nkà na ngwá iji hụ na-aga n'ihu nhazi, ọkaibe akụrụngwa mmiri. 3.Spindle mma, na-adọba ụgbọala (breeki), nnyefe, free ihe, na a handle akara, na-arụ ọrụ ndị ọzọ conveniently na ngwa ngwa. 4.Rocker ndu okporo ígwè, nke dị ná mpụta kọlụm elu, spindle, spindle uwe na ...
lathe Machine , ekwe Machine , lathe , Mpempe akwụkwọ Metal Machines, Universal lathe Machine , Metal lathe ,